လကျရှိ မနျယူနိုကျတကျ ရဲ့ ကစားသမားအစုအဖှဲ့က ဖလား ၃ လုံးရခဲ့တဲ့အသငျးထကျ ပိုကောငျးတယျလို့ ထငျနတေဲ့ ဆိုးလျရှား |
၉၉ မြိုးဆကျလို့ ချေါကွတဲ့ ဘကျခမျး ၊ ပေါလျစခိုး ၊ ဂဈ ၊ နဈကီဘတျ ၊ နဗီးလျ ညီနောငျ စတဲ့ အကယျဒမီထှကျ ကစားသမားတှရေယျ အနျဒီကိုးလျ ၊ ဒှိုကျယော့ချ ၊ ရှိုငျကငျး ၊ ဆိုးလျရှား ၊ ရှရငျဂမျ ၊ ရှမိုကျကယျ ၊ စတမျး ၊ အာဝငျ တို့လို ကစားသမားကောငျးတှေ နဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့
ပွိုငျဖကျကငျး အသငျးတသငျးကို အတိတျကာလမှာ မနျယူပရိသတျတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးပါတယျ။
ကလပျအသငျးသမိုငျးတလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျနဲ့ နောကျဆုံးအကွိမျအဖွဈ ရခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုငျးဝငျ ဖလား ၃ လုံးအောငျပှဲကို အဆိုပါအသငျးက ၁၉၉၉ ခုနှဈမှာ ရယူပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအသငျးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှဟောလညျး အခုခြိနျထိ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ အမွဲရှိနပေါတယျ။
ဖလား ၃ လုံးအောငျပှဲရယူပေးခဲ့တဲ့ အသငျးမှာ အဓိကနရောက ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဆိုးလျရှား ကတော့ သူကိုငျတှယျနတေဲ့ လကျရှိအသငျးရဲ့ ကစားသမား အစုအဖှဲ့ဟာ သမိုငျးဝငျအောငျပှဲရယူပေးထားတဲ့ ၁၉၉၉ အသငျးထကျ ပိုကောငျးတယျလို့ ထငျနပေုံပါပဲ။
အတှငျးသတငျးတှအေရ ဆိုးလျရှား ဟာ လကျရှိ သူ့ရဲ့ကစားသမားတှကေို အဲ့ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောဆိုခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ရျောနယျဒို ၊ ဆနျခြို ၊ ဗာရနျး တို့ရောကျလာပွီးနောကျ အသငျးရဲ့ လူစာရငျးအစုအဖှဲ့က အတျောလေး တောငျ့တငျးနပေါပွီ။
ဂိုးသမား နရောမှာ ဒီဂီယာ နဲ့ ဟနျဒါဆနျ ၊ ဗဟို နောကျခံလူနရောမှာ ဗာရနျး မကျဂှိုငျးယား လငျဒီလော့ဖျ ဘိုငျလီ ၊ နောကျတနျးအစှနျလူနရောမှာ လုချရှော တဲလကျဈ ဝမျဘဈဆာကာ ဒါးလော့တျ ၊ ကှငျးလယျခံစဈနရောမှာ မကျတျောမီနေး မာတဈ ဖရကျဒျ ၊
ကှငျးလယျတိုကျစဈနရောမှာ ပေါ့ဘာ ဖာနနျဒကျဈ လငျဂတျ ဗနျဒီဘိချ ၊ တောငျပံနရောမှာ ဆနျခြို ရပျရျှဖို့ဒျ ဂရငျးဝုဒျ မာရှယျ တိုကျစဈပိုငျးမှာ ကာဗာနီ နဲ့ ရျောနယျဒို ဆိုတဲ့ အစုအဖှဲ့ကို ရုတျတရကျကွညျ့လိုကျရငျ ဆုဖလားတှစေိနျချေါနိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျစရာပါပဲ။
ဒါကွောငျ့လညျး ဆိုးလျရှား က သူ့ရဲ့အသငျးဟာ သမိုငျးဝငျ ၉၉ အသငျးထကျ ပိုသာတယျလို့ ယုံကွညျခကျြရှိရှိပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈမှာပါ။
ဒါပမေဲ့ ပရိသတျအမြားစုက ဆိုးလျရှား ထငျမွငျနသေလို လကျရှိအသငျးကို ရာနှုနျးပွညျ့ မယုံကွညျရဲသေးပါဘူး။
တခြို့တှကေတော့ ရျောနယျဒို ပွနျရောကျလာခွငျးကွောငျ့ အရငျလို ရှရေောငျနရေ့ကျတှေ ပွနျရောကျလာတော့မယျလို့ တိတျတိတျလေး မြှျောလငျ့နကွေပါပွီ။
သမိုငျးဝငျအောငျပှဲရ ၁၉၉၉ အသငျးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဂယျရီနဗီးလျ က တော့ မနျယူအသငျးရဲ့ အနအေထားကို အခုလို သုံးသပျခဲ့ပါတယျ။
“အသဈရောကျလာတဲ့ ကစားသမားတှကေ မနျယူနိုကျတကျ ကို ခနျြပီယံဆုစိနျချေါသူဖွဈစဖေို့ လုံလောကျမှုရှိပွီလား .? ၊
အဲ့ဒီမေးခှနျးရဲ့အဖွကေို မနျယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှအေပွငျ တခွားပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှရေဲ့ ပရိသတျတှပေါ သိခငျြနကွေမှာပါ။
ကြှနျတျောကတော့ လုံလောကျမှုမရှိသေးဘူးလို့ ခံစားနရေတုနျးပါ။
သူတို့ထကျ ပိုကောငျးတဲ့ အသငျး ၂ သငျးလောကျရှိပါသေးတယျ “ လို့ ဂယျရီ နဗီးလျ က ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး သုံးသပျခဲ့တယျ။
နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဝုလျဗျ နဲ့ ပှဲစဉျကို ပွနျကွညျ့ပွီး သုံးသပျရရငျ ကှငျးလယျခံစဈနရောက မနျယူနိုကျတကျ ရဲ့ ဆုဖလားမြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ရိုကျခြိုးလိမျ့မယျလို့ ထငျမွငျမိပါတယျ။
ဒီလို လိုအပျခကျြတှရှေိသေးတဲ့ အသငျးကို ၁၉၉၉ အသငျးထကျ ပိုသာတယျလို့ ထငျနတေဲ့ ဆိုးလျရှား ကို ယောငျဝါးဝါး မြှျောလငျ့ခကျြတှပေေးနတောထကျ လကျတှကေ့တြဲ့ ဖွရှေငျးနညျးတှကေို ရှာဖှတောက အသငျးအတှကျ ပိုကောငျးတယျလို့ အကွံဥာဏျပေးရမလိုပါပဲ။
လက်ရှိ မန်ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကစားသမားအစုအဖွဲ့က ဖလား ၃ လုံးရခဲ့တဲ့အသင်းထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
၉၉ မျိုးဆက်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဘက်ခမ်း ၊ ပေါလ်စခိုး ၊ ဂစ် ၊ နစ်ကီဘတ် ၊ နဗီးလ် ညီနောင် စတဲ့ အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမားတွေရယ် အန်ဒီကိုးလ် ၊ ဒွိုက်ယော့ခ် ၊ ရွိုင်ကင်း ၊ ဆိုးလ်ရှား ၊ ရှရင်ဂမ် ၊ ရှမိုက်ကယ် ၊ စတမ်း ၊ အာဝင် တို့လို ကစားသမားကောင်းတွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြိုင်ဖက်ကင်း အသင်းတသင်းကို အတိတ်ကာလမှာ မန်ယူပရိသတ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကလပ်အသင်းသမိုင်းတလျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင်းဝင် ဖလား ၃ လုံးအောင်ပွဲကို အဆိုပါအသင်းက ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအသင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေဟာလည်း အခုချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်။
ဖလား ၃ လုံးအောင်ပွဲရယူပေးခဲ့တဲ့ အသင်းမှာ အဓိကနေရာက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှား ကတော့ သူကိုင်တွယ်နေတဲ့ လက်ရှိအသင်းရဲ့ ကစားသမား အစုအဖွဲ့ဟာ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲရယူပေးထားတဲ့ ၁၉၉၉ အသင်းထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်နေပုံပါပဲ။ အတွင်းသတင်းတွေအရ ဆိုးလ်ရှား ဟာ လက်ရှိ သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကို အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရော်နယ်ဒို ၊ ဆန်ချို ၊ ဗာရန်း တို့ရောက်လာပြီးနောက် အသင်းရဲ့ လူစာရင်းအစုအဖွဲ့က အတော်လေး တောင့်တင်းနေပါပြီ။ ဂိုးသမား နေရာမှာ ဒီဂီယာ နဲ့ ဟန်ဒါဆန် ၊ ဗဟို နောက်ခံလူနေရာမှာ ဗာရန်း မက်ဂွိုင်းယား လင်ဒီလော့ဖ် ဘိုင်လီ ၊ နောက်တန်းအစွန်လူနေရာမှာ လုခ်ရှော တဲလက်စ် ဝမ်ဘစ်ဆာကာ ဒါးလော့တ် ၊ ကွင်းလယ်ခံစစ်နေရာမှာ မက်တော်မီနေး မာတစ် ဖရက်ဒ် ၊ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်နေရာမှာ ပေါ့ဘာ ဖာနန်ဒက်စ် လင်ဂတ် ဗန်ဒီဘိခ် ၊ တောင်ပံနေရာမှာ ဆန်ချို ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် ဂရင်းဝုဒ် မာရှယ် တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ ကာဗာနီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို ဆိုတဲ့ အစုအဖွဲ့ကို ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ဆုဖလားတွေစိန်ခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်စရာပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း ဆိုးလ်ရှား က သူ့ရဲ့အသင်းဟာ သမိုင်းဝင် ၉၉ အသင်းထက် ပိုသာတယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်အများစုက ဆိုးလ်ရှား ထင်မြင်နေသလို လက်ရှိအသင်းကို ရာနှုန်းပြည့် မယုံကြည်ရဲသေးပါဘူး။ တချို့တွေကတော့ ရော်နယ်ဒို ပြန်ရောက်လာခြင်းကြောင့် အရင်လို ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေ ပြန်ရောက်လာတော့မယ်လို့ တိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်နေကြပါပြီ။
သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲရ ၁၉၉၉ အသင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ် က တော့ မန်ယူအသင်းရဲ့ အနေအထားကို အခုလို သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ “အသစ်ရောက်လာတဲ့ ကစားသမားတွေက မန်ယူနိုက်တက် ကို ချန်ပီယံဆုစိန်ခေါ်သူဖြစ်စေဖို့ လုံလောက်မှုရှိပြီလား .? ၊ အဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို မန်ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေအပြင် တခြားပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေရဲ့ ပရိသတ်တွေပါ သိချင်နေကြမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ ခံစားနေရတုန်းပါ။ သူတို့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အသင်း ၂ သင်းလောက်ရှိပါသေးတယ် “ လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သုံးသပ်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဝုလ်ဗ် နဲ့ ပွဲစဉ်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး သုံးသပ်ရရင် ကွင်းလယ်ခံစစ်နေရာက မန်ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဆုဖလားမျှော်လင့်ချက်တွေကို ရိုက်ချိုးလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီလို လိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတဲ့ အသင်းကို ၁၉၉၉ အသင်းထက် ပိုသာတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား ကို ယောင်ဝါးဝါး မျှော်လင့်ချက်တွေပေးနေတာထက် လက်တွေ့ကျတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို ရှာဖွေတာက အသင်းအတွက် ပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံဥာဏ်ပေးရမလိုပါပဲ။
လကျရှိကစားသမားအစုအဖှဲ့က ဖလား(၃)လုံးခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှဈကထကျ ပိုကောငျးတယျလို့ ဆိုးလျရှားယုံကွညျနေ